सरकारलाई चुनौती आन्तरिक कि बाह्य ? « Pahilo News
सरकारलाई चुनौती आन्तरिक कि बाह्य ?
प्रकाशित मिति : 29 June, 2020 7:58 am
काठमाडौं, १५ असार । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई हटाउन भारतीय राज्य संयन्त्र सक्रिय भएको आरोप लगाएपछि स्वाभाविक रूपमा कूटनीतिक क्षेत्र पनि तरंगित भएको छ ।
हुन त भारतले २६ वैशाखमा नेपाली भूमि हुँदै लिपुलेक जोड्ने सडकमार्ग उद्घाटन गर्नुअघि नेकपा सचिवालय बैठकमा शीर्ष नेताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा मागेका थिए । अहिले फेरि स्थायी कमिटीमा उनीमाथि दबाब छ । त्यसैले आन्तरिक राजनीतिक प्रतिरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय षड्यन्त्रको कार्ड खेल्न खोजेको टिप्पणी कूटनीतिक विज्ञहरूको छ ।
पूर्व राजदूत डा. दिनेश भट्टराई प्रधानमन्त्री आफैले आत्मबल गुमाउँदै गएकाले यस्ता टिप्पणी आएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री ओली आफैले नेतृत्व गरेको व्यवस्थामा आफैंले विश्वास नगरेको, धरमर भएको, नेतृत्व–क्षमता देखाउन नसकेको देखियो । आफू जुन प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसमा भारतलाई किन जोड्नु भयो भन्नेमा म आश्चर्यचकित छु,’ डा भट्टराईको भनाइ छ, ‘के उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियामा भारत कतै थियो ? थियो भने उहाँलाई ढाल्ने प्रक्रियामा पनि हुन सक्छ । अन्यथा व्यवस्थापनको दोष अरूलाई दिएर हुँदैन, आफ्नो दक्षतामा हेर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू हटेमा देशको पक्षमा बोल्ने अरू कोही नेता छैनन् भनेर अरू नेताको अवमूल्यन गर्न खोजेको पनि भट्टराईको टिप्पणी छ । ‘प्रधानमन्त्री ओली कूटनीति सञ्चालनमा दिग्भ्रमित र असन्तुलित हुनुहुन्छ ।
यसमा उहाँ पूर्णतः असफल हुनुभएको छ । उहाँले विदेश नीतिमाथि अति राजनीतीकरण गरिरहनु भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘विदेश नीतिको दुरुपयोग गरेर उहाँले आफ्नो औचित्य साबित गर्न खोज्नु भएको छ । यो एकदमै अनुचित छ ।’
सामरिक एवं रणनीतिक मामिलाविज्ञ पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा भूराजनीतिक यथार्थको अवमूल्यन हुँदा समस्या जटिल भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘नेपाल र भारतको आधारभूत संवादमा राष्ट्रिय रणनीतिक दृष्टिकोणको कमी छ ।
जनस्तर र राजनीतिक सम्बन्धको भविष्यका लागि यो राम्रो होइन । मोदी सरकारले ओली सरकारसँग संवाद नगर्ने सम्भावना मैले प्रबल देखेको छु र अब जनस्तरमा मात्रै द्विपक्षीय सम्बन्ध सीमित रहने सम्भावना देखियो ।’
नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार तगा बु्रकिंग्स इन्डियाका रिसर्च फेलो कन्स्टेन्टिनो जेभियरले ट्विटरमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओली सही पनि हुन सक्छन्, गलत पनि । तर, अहिले देखिएको अवस्था २०१८ मा माल्दिभ्सको यमिन सरकार र भारतबीच सम्बन्ध टुटे जस्तै हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीप्रति दिल्लीको विश्वास घट्दै गएको भए पनि अन्य राजनीतिक विकल्पका लागि भारतले हस्तक्षेप गर्छ भनेर बुझ्न नहुने उनको तर्क छ ।
‘भारतले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि ओलीलाई नै समस्याका रूपमा देख्न सक्ने स्थिति बनेको छ । तर, भारतलाई आरोप लगाउने नेपालका कुनै पनि नेतृत्व शक्तिमा धेरै समय टिकेको देखिँदैन । भारतले अब छिमेकमा भू–आर्थिक कनेक्टिभिटीको दीर्घकालीन रणनीतिमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भारतसँगको वार्तालाई असर गर्न सक्छ’
हामी अहिले भारतसँग परिपक्व कूटनीति देखाउनुपर्ने अवस्थामा छौँ । प्रधानमन्त्रीले यसरी विनाआधार अपरिपक्व रूपमा बोल्दा कूटनीतिक तह र भारतसँगको वार्तालाई असर पार्न सक्छ ।
कार्यकर्ताले जे पनि बोल्न सक्लान्, तर प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले परिपक्व कूटनीति देखाउनुपर्छ । सन्तुलन नमिलाउँदा देश र जनताले दुःख पाउँछन् । त्यसैले जिम्मेवार व्यक्तिहरूले बोल्दा सन्तुलित भएर बोल्नुपर्छ । अरू बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिन्न ।
सरकारसँग बहुमत छ । बहुमतको सरकारले भ्रष्टाचार रोक्ने, पार्टी मिलाउने र देशलाई बनाउन पो लाग्ने हो त, अरूलाई दोष दिने होइन । भारतले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन नै खोजेको हो भने उहाँले भारतीय राजदूतसँग स्पष्टीकरण सोध्ने, आफ्नो संयन्त्रमार्फत कुरा गर्ने हो ।
बाहिर गनगन गरेर हुँदैन । कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण र कहिले अमेरिकालाई दोष दिएर आफ्ना कमजोरी लुकाउनतिर लाग्नु हुँदैन । यस्तै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएर हुँदैन । हो भने तथ्य प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्छ । यस्ता हावादारी कुराले आफैलाई कमजोर बनाउँछ । यस्ता हर्कतबाट नेपाली जनता आजित छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट